Vinicius Jr oo u hanjabay kooxda Barcelona kahor dib u bilaabashada horyaalka La Liga – Gool FM
Dajiye May 28, 2020
(Madrid) 28 Maajo 2020. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Vinicius Jr ayaa u hanjabay naadiga ay xilfaltamaan ee Barcelona, kahor inta aan dib loogu soo laaban kulmada horyaalka La Liga xilliyada soo socda.
Horyaalka La Liga ayaa markale la filayaa in dib loo ciyaari doono 11-ka June ee soo socota, waxaana la filayaa in lasoo gabagabeyn doono 19-ka July, sida uu xaqiijiyey madaxweynaha La Liga ee Javier Tebas.
Hadaba Vinicius Jr ayaa kiciyay dareenka jamaahiirta kooxda Real Madrid kaddib wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain, kaasoo ku saabsanaa koobka horyaalka La Liga ee u dhaxeeya Barca iyo Real Madrid.
Vinicius Jr ayaa inta uu wareysigan ku jiray wuxuu u sheegay wargeyska “Marca” ee dalka Spain:
“Waxaan ku kalsoonahay in kooxdeyda ay mar kale ku laaban doonto hogaanka, waxaan kaga fiicanahay Barcelona xilli ciyaareedkan waxyaabo badan, waxaana u balan qaadayaa taageerayaasha inay ku guuleysan doonaan horyaalka dhamaadka”.
“Waa inaan ku dhameysanaa xilli ciyaareedka inagoo ah kooxda heysata horyaalka La Liga, si aan farxad uga dareeno wajiyada taageerayaasheena, kaddib dhibaatada haatan jirta, waxaan dooneynaa inaan dib ugu laabano oo aan mar kale u ciyaarno taageerayaasha dartood”.